काजकिस्तानमा विरोध प्रदर्शन दबाउन रुसी सेनाको सहयोग ! « KBC khabar
काजकिस्तानमा विरोध प्रदर्शन दबाउन रुसी सेनाको सहयोग !
२३ पुष २०७८, शुक्रबार ०९:३१
काठमाडौं २३ पुस । काजकिस्तानमा सरकार विरोधी प्रदर्शन चर्किएको छ । इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धिको विरोधमा नागरिकले प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।
मुख्य शहर अल्माटीमा भएको प्रदर्शनले हिँसात्मक रुप लिएको छ । केही सर्वसाधारण र १८ जना सुरक्षाकर्मीको ज्यान गएको बीबीसीले जनाएको छ । सयौँको संख्यामा नागरिक घाइते भएका छन् । झण्डै २३ सय जना प्रदर्शनकारी सुरक्षाकर्मीको नियन्त्रणमा छन् । प्रदर्शनलाई नियन्त्रण गर्नेक्रममा दुवै पक्षबीच झडप भएको हो । आन्दोलनमा विदेशीको घुसपैठ भएको काजकिस्तानको सरकारी पक्षले दाबी गरेको छ ।
रुसले नेतृत्व गरेको सैन्य बल काजकिस्तान पुगेको छ । राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट तोकायेभले हिँसात्मक गतिविधि नियन्त्रण गर्न २५ सय रुसी सेनाको सहयोग लिएको बताउनुभएको छ । एउटा टेलिभिजन सम्बोधनका क्रममा राष्ट्रपतिले रुसले नेतृत्व गरेको कलेक्टिभ सेक्युरिटी ट्रिटी अर्गनाइजेशन (सीएसटीओ ) लाई प्रदर्शन मत्थर पार्न सहयोग गर्न अपिल गर्नुभएको थियो । यो सङ्गठनमा रुस, काजकिस्तान, बेलारुस, ताजिकिस्तान र अर्मेनिया सदस्य छन् । सीएसटीओले ती सुरक्षा अधिकारी शान्ति सेना रहेको र उनीहरूले राज्य तथा सेनाका सम्पत्तिको रक्षा गर्ने जनाएको छ ।
उनीहरू केही दिन वा केही हप्ता बस्न सक्ने खबरमा उल्लेख छ । अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले रुसी नेतृत्वको फौज परिचालनलाई नजिकबाट नियालिरहेको जनाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ, अमेरिका, बेलायत, फ्रान्सलगायतका देशले दुवै पक्षलाई हिंसा अन्त्यका लागि आह्वान गरेका छन् । प्रदर्शन चर्किएसँगै काजकिस्तानमा सङ्कटकाल घोषणा गरिएको छ ।